Umehluko phakathi kwe-screws kanye nama-bolts kanye nomehluko wokusebenza phakathi kwe-screws nebolts
Kunokwehluka okubili phakathi kwama-bolts kanye nama-screws: 1. Ama-Bolts ngokuvamile kudingeka asetshenziswe ngokuhlangana namantongomane. Izikulufo kungenziwa screw ngqo kwi matrix of imicu yangaphakathi; 2. Ama-bolts adinga ukuklwebulwa nokukhihlwa ngebanga eliqinile, futhi namandla okuvala izikali mancane. Ungase futhi ubone ...
Ngabe izikulufa zilungele ini?
Izikulufo zisetshenziswa kabanzi. Izikulufo kungenye yezimpawu zethu ezivamile. Isetshenziswa ikakhulu kulezi zindawo ezine ezilandelayo: 1. Ipuleti yensimbi engenasici, ipuleti yensimbi, ipuleti yensimbi egxiviwe, ukufakwa kobunjiniyela. 2. Metal kwesihenqo sodonga sensimbi ekhanyayo nokunye ukufakwa kwangaphakathi nangaphandle. 3. IGene ...
Isikhunta sokuzigwedla siyingxenye yemishini eyisisekelo, edingeka kakhulu. Imvamisa, ama-bolts, ama-screws, ama-rivets, njll, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha noma ngokuvamile akudingi ukubheka ithonya lokushisa, indawo embi noma ezinye izimo zokusebenza eziyingozi. Izinto ezijwayelekile ziyinsimbi yekhabhoni, iphansi ...
Izici eziphakeme zamandla okuqina aphezulu ama-fasteners eklasi 8.8, Class 9.8, class 10.9, class 12.9 fasteners. Ama-fasteners anamandla aphezulu abonakala ngokuqina okukhulu, ukusebenza okuhle kwesimo, ukusebenza kahle kwemishini, ukuqina okuphezulu kokuxhumana, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, futhi kulula futhi ...
I-Senco DS225-18V Ukubuyekezwa kwe-Driver Auto-feed Screw Hands-On
I-Senco DS225-18V Duraspin Auto-Feed Screw Driver iyisilo esisheshayo esisheshayo sethuluzi esithatha ubuciko bakho ukuya ezingeni elilandelayo. Ngesethi yezici eyindilinga kahle, uzohamba ngomsebenzi wakho olandelayo we-drywall noma we-subfloor. Iqembu ngemuva kweSenco Duraspin DS225-18V Durasping Au ...